“အတွေးစလေးတွေ”: မောင်ဖြူဆိုသော သူငယ်ချင်း . . .
Posted by Han Kyi at 6:53:00 am
ဆြာ နည်းနည်းရှည်တယ် ကူးသွားတယ် အိမ်မှာဖတ်မယ်ဆြား)
အမေ့နေ့အတွက် ပြာသိုလပြည့်နေ့ မန်းမဂ္ဂဇင်းအတွက်တပုဒ်လာတောင်းတယ်ဆြာ အမေ့ကဗျာရေးမယ်ဆို အဖေ့မျက်နှာပြေးမြင်ပြီး အမေ့ကဗျာသတ်သတ်မရေးဖြစ်ဖူးဆြာ ဒါနဲ့ နုပျိုသူများကိုရေးဖြစ်တယ်ဆြာ စာမျက်နှာပေါ်မလွှတ်ရဲဖူးဆြာ
အဲတာကြောင့်သားသမီးတွဲလောင်းနဲ့ဘုတ်ထိုင်းကြီးတွေဖြစ်လို့..... :P အင်းလွမ်းလာပြီဗျာငယ်ဘ၀ကို
မောင်ဖြူအကြောင်းပြီးတော့ ကြားဖြတ်အနေနဲ့ ဆရာနဲ့ မဒမ်နဲ့ အကြာပေါင်း အကြောင်းပါခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးလဲ လုပ်ပါဦးဆရာရယ်။ တောင်းဆိုပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့။ အပြိုးပိုင် အပြိုင်များပိုးခဲ့ရသလားလို့။း))
တစ်ယောက်ချင်း အကြောင်းလေးတွေ စောင့်မျှော်နေပါတယ်အကို... ဘယ်အချိန်တွေးတွေး ကြည်နူးစရာ အပြည့်နဲ့ ..ငယ်ဘဝတွေ ပေါ့ နော်.
အဆက်သွယ်မရတော့တဲ့ သူငယ်ချင်းမလေး တစ်ယောက်ကို ဘယ်နားရှာရမှန်းမသိ.... :(
(ဦးဟန်ကြည်လို အလိမ္မာ၊ အိမ်ပါ ဇနီးမယားအနိပ်နဲ့ သမီးသားအစိတ်ရပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းများလည်း တောင်းပေးလိုက်မိပါတော့တယ်။)
ဆရာရေ ဒီတစ်ခေါက် အနော့်စီ လာရင် ဒီလို
ဦးဟန်ကြည်ကြီး မောင်ဖြူနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေ...
ဆရာဟန်တို့များ သူ့သူငယ်ချင်းအကြောင်းပြောရင်း သူ့မဒမ်ကြည်အကြောင်း ကပ်ကြွားသွားသေးတယ်.. ဟင်းဟင်း..
ဟုတ်တယ် ကိုကိုမောင်ပြောတာ ထောက်ခံတယ်. သူငယ်ပြန်တာ ပြီးသွားရင် မဒမ်ကြည်နဲ့ တွေ့ပုံ ဆုံပုံ မေတ္တာမျှပုံ စတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ငယ်မူငယ်သွေးလေးတွေနဲ့ လုပ်ပါဦး.. ဖတ်ပါရစေ...
ဒီလို အလိမ္မာအိမ်ပါ ဇနီမယား အနိပ်ကလေးကိုရဖို့ ဘယ်လို ဗျူဟာတွေ သုံးခဲ့တယ်ဆိုတာ နောင်လာနောက်သားတွေကိုလည်း ပြောပြသင့်တယ်ဆရာဟန်..း)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းသားဘ၀ကခင်မင်စရာ တကယ်ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိခဲ့တာဘ၀ထဲမှာအမှတ်ရစရာပါ။ ပျော်ဖို့ကောင်းသလိုလွမ်းဖို့လည်းကောင်းတယ်။ဆက်ရေးပါဦးခင်ဗျာ။
ဆရာ့ရဲ့ ငယ်မူပြန် သူငယ်ချင်းအလွမ်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်သွားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ငယ်ဘ၀ဆိုတာတွေကတော့ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ပြန်တွေးလိုက်ရင် တမ်းတစရာလေးတွေတော့ ရှိတတ်ကြတာချည့်ပါပဲဆရာရေ။